စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာ- ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးရန် လိုအပ်သည်များ | e-commerce သတင်း
Analytics, CRM နှင့် Big Data
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာ- ပိုမိုအကျိုးရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင်လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများအားလုံး
ဣဇာက်သည် | 27/04/2022 15:56 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/04/2022 19:15 | လုံခွုံရေး, သင်ခန်းစာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ
လုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ရန် သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိပြီးသားလုပ်ငန်းကို ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးနေပါက အချို့ကို သိထားသင့်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာဖြေရှင်းနည်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးတို့ကို သင်ရရှိစေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ယနေ့ခေတ် အရင်းအမြစ်များ၏ အရေးအကြီးဆုံး ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုမှာ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်နေပါက၊ အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိစေရန်နှင့် သင်၏အခွန်၊ ဘဏ်နှင့် သင်၏ဖောက်သည်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရန် ဤဖြေရှင်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
1 ရုံးများအတွက် အကောင်းဆုံး PC များ
3 ကုမ္ပဏီများအတွက် router များ
4 ဟာ့ဒ်ဝဲ firewall
6 UPS စနစ်
7 ကုဒ်ဝှက်ထားသော သိုလှောင်မှု
8 vpn ဘောက်စ်
10 ပညာရှင်များအတွက် တက်ဘလက်များ
11 လုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် လက်ပ်တော့များ
13 စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော hard drive များ
14 လုံခြုံပြီး ကြံ့ခိုင်သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ
15 router mesh
16 ရုံးသုံး ကုလားထိုင်များနှင့် စားပွဲများ
18 DNIe နှင့် RFID စာဖတ်သူ
19 ရောင်းရန်၏ point
20 တယ်လီဖုန်းသုံးလုံးနှင့် တယ်လီဖုန်းခလုတ်ခုံများ
23 လုပ်ငန်းများအတွက် ပရင်တာ/ဘက်စုံသုံး၊ မိတ္တူ
25 သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ပိုလေးစားသော စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ
26 ergonomic ထိန်းချုပ်မှု
ရုံးများအတွက် အကောင်းဆုံး PC များ
မသန်စွမ်း ရုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါ။ PC တစ်လုံးတွင် ကောင်းမွန်သော အင်္ဂါရပ်များ မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စျေးသက်သက်သာသာ ဖြစ်သောကြောင့် မတူညီသော အလုပ်သမားများအတွက် ၎င်းတို့ကို အများအပြားဝယ်မည်ဆိုပါက ပို၍ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပြုချက်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Lenovo IdeaCenter AIO များ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖို့ တစ်ခုခုကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် ပိုမိုလေးလံသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။rendering၊ virtualization၊ encoding၊ scientific software စသည်တို့ကဲ့သို့သော၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ဤအလုပ်ရုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Corsair ONE Pro ကို
HP က Z4 G4
HP က Z2 G5
ကုမ္ပဏီများအတွက် router များ
အတွက် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်မှု ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို တူညီသော WiFi ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်မည့်နေရာ၊ သင်သည် ဤကောင်းမွန်သော router များထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
မသန်စွမ်း ကုမ္ပဏီတွင်းကွန်ရက် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပါ။ကောင်းသောဝယ်ယူမှုသည် ဟာ့ဒ်ဝဲဖိုင်းဝေါလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါတင်မကဘဲ၊ အလုပ်ချိန်အတွင်း ဝန်ထမ်းတွေ မဝင်ရောက်စေချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို စစ်ထုတ်ပြီး ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
ရှိသည် ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာသင့်ဆိုဒ်၊ သင့်ဒေတာ သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကောင်းသော microserver ဖြေရှင်းချက်အချို့ရှိပါသည်။
Lenovo Think System ၊
မုန်တိုင်းကျတဲ့နေ့တွေမှာ ဓါတ်အားပြတ်တောက်ပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့ အချိန်မှာ သင့်အလုပ်တွေ မီးပျက်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ရင် ဝယ်ပါ။ Uninterruptible Power Supply ဖြတ်တောက်ခံရသည့်တိုင် လက်ရှိရှိရန်။
Schneider လျှပ်စစ် SMC1000
သင့်လုပ်ငန်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ၎င်းကိုဝင်ရောက်၍မရနိုင်စေရန်၊ သင့်တွင် ဤဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်။ ကုဒ်ဝှက်ထားသော သိုလှောင်မှု စကားဝှက်ဖြင့်။
Firewall ကိရိယာအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မတင်ပြမီတွင် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုတည်းမဖြစ်သင့်ဘဲ၊ ၎င်းသည် အားဖြည့်ပေးပါသည်။ VPN ဖြင့် လုံခြုံရေး ထို့ကြောင့် အဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး၊ အချို့သောဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် သင်ကိုင်တွယ်သည့်ဒေတာကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားခြင်းမပြုရန်။ သင့် router သည် VPN ကို မပံ့ပိုးပါက စိတ်မပူပါနှင့်၊ သင် router သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော ဤကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော ဖြေရှင်းနည်းများ ရှိပါသည်။
Shellfire ၏2နှစ်ဝန်ဆောင်မှု
Shellfire ၏ဝန်ဆောင်မှု 1 နှစ်
a သို့ပြောင်းပါ။ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ကြိုးတပ်ပရင်တာ သို့မဟုတ် MFP သင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သော ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာများနှင့်
HP Jetdirect ဖြစ်သည်
သင်လိုအပ်လျှင် သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် တက်ဘလက်ဤအရာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက် ကောင်းသောရွေးချယ်စရာများဖြစ်နိုင်သည်-
Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S7
Apple က iPad အတွက် Pro ကို
လုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် လက်ပ်တော့များ
အချို့ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လက်တော့ပ်ကောင်းများ သင်လိုအပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် လုံခြုံရေးကို ပေးဆောင်ရန်အပြင် ဖန်တီးမှုအသုံးပြုမှုများအတွက်ပါ ဤပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Microsoft က Surface Pro 8
သင်သွားလေရာရာ၌ သင့်ဒေတာအမြဲရှိရန် လိုအပ်သော်လည်း cloud သိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုချင်ပါ... သင်၏ကိုယ်ပိုင် cloud NAS နဲ့လား။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော hard drive များ
အတွက် ကုမ္ပဏီတွင်း သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် အရန်သိမ်းဆည်းမှုများအတွက်လုပ်ငန်းအဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အတူ ဤစွမ်းရည်မြင့် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များထဲမှ တစ်ခုကိုလည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
လုံခြုံပြီး ကြံ့ခိုင်သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ၎င်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာမရှိပါ။ စမတ်ဖုန်းတစ်ခု. ဒါပေမယ့် အဆိုးဆုံးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖုအထစ်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ အက်ကြောင်းတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ပိုကြီးတဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ရှာနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြံပြုချက်ပါပဲ။
သင့် WiFi ၏ လွှမ်းခြုံမှုသည် နေရာအားလုံးကို ညီတူညီမျှ မရောက်ပါက၊ အနက်ရောင် ဧရိယာများ ရှိသည် သို့မဟုတ် အချက်ပြမှု အလွန်အားနည်းပါက၊ ဖြန့်ဝေရန်နှင့် ချဲ့ထွင်ရန် Router များ၏ mesh တစ်ခုကို ရယူပါ။ သင်လိုအပ်သလောက်ကွန်ရက်.
TP-Link ကို Deco M9 Plus အား
Nova MW3 ကို သိမ်းဆည်းပါ။
ရုံးသုံး ကုလားထိုင်များနှင့် စားပွဲများ
အရာအားလုံးဟာ အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာလည်း ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းအတွက် အထောက်အပံ့များနှင့် အလုပ်အဆင်ပြေသော နေရာတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ဒီမှာ အကြံပြုချက်တချို့ပါ။ စားပွဲများအတွက်-
2-in-1 နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ကွန်ပျူတာစားပွဲ
ဖန်တီးမှုအရှိဆုံး သို့မဟုတ် မှတ်စုများကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး ၎င်းတို့၏ မှတ်စုများနှင့် ပုံကြမ်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်.
DNIe နှင့် RFID စာဖတ်သူ
လိုအပ်တာရှိရင် လုပ်ပါ။ စာတမ်းပြုစုခြင်းနှင့် ဗျူရိုကရေစီလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါ။ဒီစာဖတ်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ရှိသင့်တယ်။
DNIe ၏ Chipnet စာဖတ်သူ
ငွေပေးချေမှုများအတွက်၊ သင်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ရောင်းပွိုင့်၊ အဆောက်အအုံရှိရင် အများသူငှာ ဖွင့်ပေးတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်အနေဖြင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အကြွေး သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းအတွက် စက်တစ်ခု ငွေပေးချေမှုဂိတ်.
ဒါတွေကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အထုပ်လေးတွေပါ။ ရုံးသုံး တယ်လီဖုန်းများ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်း ခလုတ်ခုံများ အိမ်ကနေတောင် မင်းရဲ့အလုပ်က ပိုလွယ်လိမ့်မယ်။
အီလက်ထရွန်းနစ်သော့ခလောက်များ၊ လုံခြုံသောအင်တာနက်ငွေပေးချေမှုများကို သင့်မှတဆင့် biometric ဒေတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပင်။ ဤသုံးမျိုးလုံးနှင့် ထုတ်ကုန်။
တည်ရှိမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Biometric reader
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာပါရှိသော Kensington USB
စာရွက်စာတမ်းများ၊ ငွေများ သို့မဟုတ် အခြားတန်ဖိုးရှိသော အရာများကို သိမ်းဆည်းရန် ဤအရာများထဲမှ တစ်ခုကို မဆုံးရှုံးသင့်ပါ။ Safeမြင်နိုင်သည်နှင့် လျှို့ဝှက်ထားသည် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားသည်။
Arregui သည် ခြေစွပ်များတွင် ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ရုံး သို့မဟုတ် အိမ်သုံးအတွက် VEVOR ဘေးကင်းပါသည်။
လုပ်ငန်းများအတွက် ပရင်တာ/ဘက်စုံသုံး၊ မိတ္တူ
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဆက်ခြင်းတွင် သာမန်အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း အမျိုးအစားအားလုံးကို ပုံနှိပ်ပါ။အလုပ်သည် ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် အခြားဖန်တီးမှုတစ်ခုခု၊ အစီအစဥ်များပါရှိသော ဗိသုကာပညာဖြစ်သည့်အခါ ပို၍ပင်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေ မပျောက်ပျက်သင့်ပါဘူး။
HP LaserJet လုပ်ငန်း
HP က LaserJet Pro ကို
ပုံတူရိုက်ခြင်းအတွက် သင့်လက်ချောင်းထိပ်တွင်လည်း ရှိသည်။ plotters များ၊ CNC စက်များနှင့် 3D ပရင်တာများ.
MarketBot ပုံတူကူးစက် 3D ပရင်တာ
HP DesignJet Plotter ပရင်တာ
သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ပိုလေးစားသော စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ
သင့်အမြင်အာရုံကို မထိခိုက်စေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စခရင်များ သို့မဟုတ် မော်နီတာများ သို့မဟုတ် အချို့သော အသိအမှတ်ပြုနည်းပညာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ စခရင်ရှေ့မှာ သင်အသုံးပြုတဲ့ နာရီတွေဟာ သင့်အဆစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေကို မထိခိုက်စေဘဲ ဒီဇိုင်းနည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမပါတာကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမဖြစ်စေကြောင်း သေချာပါစေ။ ergonomic.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » CMS နှင့်နည်းပညာ » သင်ခန်းစာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ » စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာ- ပိုမိုအကျိုးရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင်လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများအားလုံး
ကောက်ယူခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း